Vidio 4 - Medicalzọ Ahụike (Nkebi nke 2) | Ebumnuche (Njikọ Aka Na-emegide Mmụta Mmekọahụ)
Vidio 4 - Medicalzọ Ahụike (Nkebi nke 2)
Dysphoria okike - Medicalzọ Ahụike / Site mere
Site na Prof John Whitehall.
4 vidiyo - Dysphoria nke Nwata.
Medicalzọ Ahụike Maka Mmegharị Mmekọahụ (Akụkụ 2).
Medicalzọ ahụike a nwere nsogbu ndị siri ike, ọ na-eduga n'ịkwa oge ndụ nlekọta ahụike.
Yabụ, gịnị kpatara ya? A ga-enwerịrị ihe akaebe. A ga-enwerịrị ihe kpatara nke a. A ga-emerịrị ihe ndị a niile, n'ezie, site na laabu na anụmanụ buru ibu na ịwa ahụ na usoro sayensị. N’ezie, mgbe anyị na - achọ ụdịrị ihe ahụ pụrụ iche iji chọpụta ma ọgwụ mgbochi ọhụụ adịghị mma ma ọ bụ na ọ nweghị nchebe, anyị na - enye ya ụmụ anụmanụ, anyị enyocha ya, anyị na-atụle ya na n’ikpeazụ, anyị nwere ọnwụnwa. Anyị kpuo ìsì, ule ọnwụnwa, ụdị ihe niile. Ọ na-arụ ọrụ? Ọ dị mkpa? Na ngwụcha, anyị na-enweta nnabata, ee, nke a enwetala ọgwụ, sayensị, na-akọwa
Ajụjụ bụ, olee ụdị sayensị sayensị na-akwado n'okpuru usoro ọgwụ a dị ukwuu? Ihe niile m nwere ike ime bụ ịgụ ọrụ ndị ọzọ kwuru. Nke a ihe m na-ekwu, na m na-ehota ebe a site na edemede, nke dị ezigbo mkpa n'ihi na ndị dere si'slọ Ọgwụ Childrenmụaka na Melbourne dere ya. Gịnị mere nke ahụ ji dị mkpa? N'ihi na Gender Dysphoria Clinic bụ isi ụzọ nke usoro ọgwụgwọ a na Australia.
Yabụ, lee ụfọdụ ndị dere ya na ihe ha chọrọ ime ebe a. “Anyị ga-eme nyocha akwụkwọ banyere ọgwụgwọ homonụ na ndị na-eto eto nwere Gender Dysphoria, nyocha nyocha. Nke a ga - abụ mkpokọta nke akwụkwọ mba ụwa niile banyere “mmụọ mmekọrịta ọha mmadụ, mmakọ na ma ọ bụ mmetụta anụ ahụ nke ahụ.”
Ọma. Ha kpebiri na ha ga-arụ ya. Ha laghachiri wee lelee akwụkwọ ahụike ahụike site na Jenụwarị 1946, ruo na June 2017, na-achọ ihe akaebe. You ma akwụkwọ ole ha chọtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri asaa nke sayensị ọgwụ? Iri na atọ! Iri na atọ naanị akwụkwọ. Ha kwuru, sị, nke a bụ nnukwu echiche? Ọ dị mma, ka anyị hụ ihe ha kwuru. “Banyere mmetụta omume nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke mmadụ iri na atọ a,” n'ebe ahụkwa ka ha na-ekwu, “nke a dị ụkọ.” Ọfọn, ọ bụ. N'okwu ọgwụ, nke a abụghị ụkọ, ọ bụ okwu ekike. Nke a adịkarịghị adị. Ozi iri na atọ. O siri ike ihe ọ bụla! Banyere mmetụta uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ha na-akọ na usoro ọgwụgwọ transgendering metụtara mmụba dị ukwuu n'ọtụtụ usoro mmụọ, gụnyere ịrụ ọrụ zuru ụwa ọnụ na ịda mba na nsogbu omume na nke mmụọ.
Ugbu a ka anyị kwesiri ileba anya nke ọma. Ihe ha na-ekwu bụ na ntinye aka nke otu ndị okenye raara onwe ha nye na ndị ọrụ mmekọrịta mmadụ na ndị ọkachamara na ndị nkuzi, na onye ọ bụla ebumnuche ya bụ ime ka nwatakịrị ahụ enweghị obi ụtọ nwee obi ụtọ, na-arụ ọrụ. Yabụ, nlebara anya na-enweghị atụ maka nwatakịrị ahụ enweghị obi ụtọ bụ, m ga-arụ ụka, nwere ike ime ka nwatakịrị nwee obi ụtọ.
Okwu a abụghị obi ụtọ mgbe ha na-aga ụlọọgwụ ahụ, okwu a bụ, ha ana-enwe ọ happyụ n'oge oyi na owu na-agba afọ ndị okenye? , Nwere ihe na-egosi na nke a bụ eziokwu? Obi ọ̀ dị ha ụtọ ka ọ bụ na ha adịghị? Otu ihe na-emenye ụjọ, na-emegiderịta onwe ya bụ na ọnụ ọgụgụ igbu onwe onye nke ndị transgend ndị okenye toro ugboro iri abụọ na iri atọ karịa onye ọ bụla ọzọ. Na onye ọ bụla maara na otu ị si ele ya anya, ọnụ ọgụgụ obi ụtọ adịghị ebe ahụ. Yabụ, m na-arụrịta ụka na mbụ, na nke a bụ nkwubi okwu na-enweghị mmesi obi n'ihi na ha anaghị akọwara ebe a ihe nlebara anya, nke na-ekwekọghị n'okike, nke ụmụaka ndị a na-ata ahụhụ na-enweta.
Ka anyị gaa na nke ahụ. Ọ dị mma, gịnị banyere ihe ndị ọzọ metụtara nsogbu omume na nke mmụọ? “Ihe doro anya na-ewe iwe na nchegbu. Enweghi mmetụta dị ịrịba ama na mgbaàmà nke Gender Dysphoria. ” nke bụ ya mere ha ji enye ya. N'ezie, otu nnyocha tụrụ aro na mmụba nke Gender Dysphoria na nsogbu nsogbu ahụ. Ya mere, otu esi emesighachi obi ike.
Banyere mmetuta mmuta nke ọgwụgwọ? Naanị ntụaka abụọ n'ime afọ iri asaa ahụ dum. Otu nnyocha nyochara ọrụ ndị isi, nke bụ ikike ịme mkpebi na ahụmịhe gara aga, mmetụta uche, ihe ọmụma na ihe ndị ọzọ. Nyochaa ọrụ ndị isi na ụmụaka 8 na ndị na-egbochi ndị na-achọpụta oke belata izi ezi na ihe ndị ọzọ.
Ha lere anya na njirimara na ihe ndabere nke ihe ojoo nke ihe omumu iri na ato a. Ma, m na-ekwu, nke a abụghị ọrụ m, ọ bụ nke ha. "Na nyocha nile nke bụ ụzọ dị elu nke enweghị isi n'ihi ntakịrị ọnụọgụ, enweghị njikwa, ọnwụ ịgbaso, ịlaghachi azụ, enweghị usoro aghara na ikpu ìsì." Gịnị ka ha kwubiri? "Ọ dị mkpa ịtụle ma gbasaa na nchọpụta nke ọmụmụ ndị ọzọ." Ihe a ọ bụ ihe pụrụ iche? Mba, enwetabeghị m ohere ịbanye na ya. Naanị m na-ehota ebe a nchịkọta nke ọtụtụ nyocha banyere nke a.
“A na-ekwenyeghị n'ihe gbasara itinye aka ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ kwesịrị ekwesị. Ogologo oge data nwere oke. Obere onu si n’otu ulo ogwu. Enweghi omumu ihe omumu. Ya mere, ihe akaebe bụ naanị echiche ndị ọkachamara. ”Ọ bụrụ na ị tụlere okwu onye ọkachamara, olee otu ha ga - esi bụrụ ọkachamara mgbe ihe a niile bilitere na afọ ole na ole gara aga? Onweghị onye bụ ọkachamara. Onweghi onye n’enwe ike iso umuaka ndia rue oge ndi oyi. Otu ọkachamara na-ekwu, "nke a na-emetụta," site na iji usoro nkwenye ọdịbendị na usoro echiche nke ọdịbendị na-emetụta. "
Yabụ, gịnị kpatara ya? Kedu ihe kpatara oke itinye aka na uche na anụ ahụ ụmụaka, ebe enwere n'ezie, ọ nweghị sayensị na-emetụta ya?
Ọ bụrụ na ị na-emegide nke a na nduzi nke ikpe Nuremberg, nke arụrụala ọjọọ nke ndị dọkịta Nazi, na anaghị m ekwu na ndị dọkịta a nọ n'ụzọ ọ bụla, ndị dọkịta anyị dị ka ha, mana ikpe Nuremberg kwuru na ị ekwesịghị na-eme nyocha belụsọ ma inwee nkwenye. Ikwesighi ime ya belughi ma oburu na ichoputa ihe sayensi nke ihe kpatara ichoro ime ya. Na na i kwesiri inwe ihe omumu sayensi site na oru nyocha na ihe ndi ozo.
Ihe anyị ga-eme nke na-esote bụ ileba anya na ndị bụ ụmụaka a. Anyị kọwapụtara ebe a ihe usoro ahụike gụnyere, nke a bụ nke ndị isi ngalaba ụmụaka na-amalite na Australia. Nke a bụ ihe ụzọ ahụike gụnyere. Nke ọzọ anyị ga-ele anya, nke ọma, ndị bụ ụmụaka a? Ànyị maara ihe karịa ha? Anyị ga-emetụ aka n’otu isiokwu dị mkpa. Anyị ga-ele anya nke ọma, ndị nne na nna metụtara? Ma mgbe nke ahụ gasịrị, anyị ga-elebakwu anya na nke na-esote nke ahụ na nkọwa ndị ọzọ na ya. Yabụ, ihe anyị mere ugbu a bụ ịkọwapụta oke mbubata nke a, anyị na-ekwusi ike n'eziokwu na enweghị usoro sayensị. Nke a bụ "uche ọkachamara," nke a na-akpọ. Nke a bụ nnwale, na ihu ndụmọdụ niile, dịka ọmụmaatụ, site na ọnwụnwa Nuremberg
Vidio 4 – Pzọ Nlekọta Ahụike Maka Mmegharị Mmekọahụ (Akụkụ 2). - Pịa> Iji budata PDF ebe a.